Kedu ihe na - agbanwe mmejọ na kedu ka esi hibe ha | Network Meteorology
Taa, anyị ga-ekwu maka otu akụkụ metụtara tectonics plate: na-agbanwe mmejọ. Ọnụnọ ya ejirila ọnọdụ nke ọtụtụ ụdị ihe enyemaka na ọ dị oke mkpa na geology. Na nke a, ị ga-amụta ihe kpatara nsogbu mgbanwe na otu esi ewepụta ya. Tụkwasị na nke a, ị ga-amụta mmetụta ọ nwere na ọdịdị ala nke ala.
Youchọrọ ịma ihe niile metụtara ọdịda ndị a? Na-agụ reading
1 Ofdị ọnụ n'etiti efere
2 Nchọpụta nke ịgbanwe nsogbu
4 Ebee ka a hụrụ mmejọ ndị a?
Ofdị ọnụ n'etiti efere
Dị ka echiche nke plate tectonics na-ekwu, e kewara ekewa ụwa n'ime mbadamba tectonic. Efere ọ bụla na-agagharị na ọsọ mgbe niile. Na nsọtụ n’etiti efere enwere arụ ọrụ ala ọzọ n'ihi esemokwu ike. E nwere ọtụtụ ụdị ọnụ n'etiti efere dabere na ọdịdị ha. Ha dabere na ma e bibiri ihe e dere ede, emee, ma ọ bụ gbanwee.
Iji mata mbido nke mmejọ mgbanwe, anyị kwesịrị ịmata ụdị akụkụ dị iche iche dị n’etiti efere. Nke mbu, anyi na ahu uzo di iche. N'ime ha, e kewara akụkụ nke efere site na okike nke oke osimiri. Nke abụọ bụ convergent n'ọnụ ebe ebe kọntinent abụọ na-adaba. Dabere n'ụdị efere ahụ, ọ ga-enwe mmetụta dị iche. N'ikpeazụ, anyị na-ahụ n'ọnụ na-agafe agafe, na nke e ekeghị ma ọ bụ bibie ihe e dere ede.
N'ebe na-agafe agafe, enwere nrụgide ịkwa akwa site na efere. Mbadamba nwere ike ịbụ oke osimiri, kọntinent, ma ọ bụ ha abụọ. Achọpụtara mmejọ na-agbanwe agbanwe na ebe ndị ahụ efere na-agagharị dị ka akụkụ ndị a na-atụghị anya na oke osimiri. Na mbido echiche a, echere ya na oke osimiri a haziri ha n'agbụ dị ogologo ma na-aga n'ihu. Nke a bụ n'ihi nnupụisi kwụ otu ebe na nsogbu ahụ. Agbanyeghị, mgbe elere ya anya nke ọma, enwere ike ịhụ na ngbanwe ahụ nwere oke ihe kpatara ya. Nke a mere na ntụzịaka dị mkpa iji mepụta mkpochapụ nke oke osimiri adịghị eme.
Nchọpụta nke ịgbanwe nsogbu
Achọpụtara mmejọ na-agbanwe agbanwe obere oge tupu ebuputa echiche nke tectonics plate. Ọ chọtara ya ọkà mmụta sayensị H. Huzo Wilson na 1965. Ọ bụ Mahadum nke Toronto ma tụọ aro na mmejọ ndị a sitere na eriri afọ zuru ụwa ọnụ. Belt ndị a bụ oghere na-agbanwe agbanwe ma dị iche iche nke anyị hụburu na mbụ. Ejikọtara eriri eriri a niile zuru ụwa ọnụ na ntanetị na-aga n'ihu na-eme ka ihu ụwa dị na efere siri ike.
Ya mere, Wilson ghọrọ onye ọkà mmụta sayensị mbụ na-atụ aro na ụwa mejupụtara efere dị iche iche. Ọ bụkwa onye nyere ihe ọmụma banyere mwepụ dị iche iche dị na mmejọ ahụ.
Imirikiti mmejọ na-esonye ngalaba abụọ nke oke osimiri. Mmejọ ndị a bụ akụkụ nke agbaji na oke osimiri nke a maara dị ka mpaghara mgbaji. Mpaghara ndị a gụnyere mmejọ mgbanwe na ndọtị niile na-anọgide na-adịghị arụ ọrụ n'ime efere ahụ. Mpaghara mgbawa a na-ahụ ha kwa narị kilomita itoolu n'akụkụ ahịhịa ndị dị n'oké osimiri.
Ihe arụ ọrụ ngbanwe kachasị arụ ọrụ bụ nke achọtara naanị n'etiti ngalaba abụọ a gbapụrụ agbawa nke riiji. N’elu oke osimiri ahụ enwere akụkụ nke mkpọda ahụ na-agagharị n’akụkụ nke ọzọ site na ala oke osimiri nke a na-eme. Ya mere, n’agbata mpaghara ugwu abụọ ahụ, efere abụọ ahụ dị n’akụkụ na-ete ka ha na-emejọ.
Ọ bụrụ na anyị pụọ na mpaghara nọ n'ọrụ nke riiji nke ridges ahụ, anyị na-ahụ ụfọdụ mpaghara anaghị arụ ọrụ. N'ebe ndị a, a na-echekwa mgbawa ndị ahụ dị ka a ga-asị na ha bụ ọnya ihu igwe. Ntụziaka nke ebe ndị gbajiri agbaji na-atụgharị uche na ntụgharị mmegharị nke efere n'oge a kpụrụ ya. Ya mere, ihe owuwu ndị a dị mkpa mgbe ị na-egosi usoro nke mbugharị efere.
Ọrụ ọzọ nke igbanwe mmejọ bụ inye ụzọ ụzọ oke osimiri si kee, nke ekepụtara n'elu ahịhịa, a na-ebu ya gaa ebe mbibi. A na-akpọ ebe a ebe ebibi efere ma weghachite ya n'ime akwa nke ụwa oke osimiri ma ọ bụ mpaghara subduction.
Ebee ka a hụrụ mmejọ ndị a?
A na-achọta ọtụtụ n'ime mmejọ na-agbanwe n'ime oke osimiri. Otú ọ dị, dị ka e kwuru na mbụ. e nwere akụkụ dị iche iche nke efere. Yabụ, ụfọdụ mmejọ gafere akụkụ ụwa. Ihe omuma a ma ama bu ihe kpatara San Andreas na California. Ndahie a na-akpata ọtụtụ ala ọma jijiji n'obodo ahụ. Ihe omuma ya bu na emegoro ihe nkiri nke mebiri nbibi nke odida.
Ihe atụ ọzọ bụ nsogbu Alpine na New Zealand. Nsogbu San Andreas na-ejikọ ebe mgbasawanye dị na Ọwara Oké Osimiri California na mpaghara Cascade subduction na Mendocino Transforming Fault, nke dị n'akụkụ ugwu ugwu ọdịda anyanwụ nke United States. Na Pacific efere na-akpụ akpụ na a ugwu ugwu direction dum San Andreas kpatara. Iji soro usoro a gara n'ihu, kemgbe ọtụtụ afọ, mpaghara Baja California nwere ike ịghọ agwaetiti ọzọ site na mpaghara ọdịda anyanwụ dum nke United States na Canada.
Dika nke a ga eme na onodu uzo ala, odi nkpa nkpa ugbu a. Ihe kwesiri inwe oke nchegbu bu ọrụ seismic na-ebute ihe kpatara ya. Enwere ọtụtụ mmegharị ahụ na-eme na mpaghara ndị a. Ala ọma jijiji na-ekpebi ọdachi, ọghọm nke ihe onwunwe na ndụ. Buildingslọ nke San Andrés dị njikere iguzogide ala ọma jijiji. Otú ọ dị, dabere na ịdị njọ nke ọnọdụ ahụ, ọ nwere ike ịkpata ezigbo ọdachi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụwa na oke osimiri anyị siri ike nghọta. Ọrụ ya dị oke mgbagwoju anya na nchọta ya na-adịwanye mkpa. Site na ozi a, ị ga-enwe ike ịmụtakwu banyere mmejọ na-agbanwe agbanwe na nsonaazụ ndị dị na ala na enyemaka mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe na-agbanwe mmejọ na kedu ka esi hibe ha
Kedu ihe na kedu ka esi hibe guyots?